Mavhiri Kumusoro vanobatana neInternational LGBTQ + Travel Association
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Mavhiri Kumusoro vanobatana neInternational LGBTQ + Travel Association
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • ushanyi • kutakura • Akasiyana Nhau
The International LGBTQ + Yekufamba Sangano yazivisa nhasi kuti Mavhiri rave iro rekutanga wepasirose mudanho mune yakazvimirira yendege chikamu. Mavhiri Kumusoro, iyo inotungamira mhando mune yakasarudzika nendege, yakazvipira kujoina IGLTA pane basa rayo rekutsigira LGBTQ + kufamba pasi rese. Mavhiri Kumusoro achave nemukana wekutaurirana nenhengo dzebhizimusi repasirese nhengo uye vanogashira kuoneka pakati pevafambi veLBBTQ +.
"Tinodada kuva IGLTA Global Partner uye tinotsigira nekupemberera nharaunda yeLBBTQ," akadaro Stephanie Chung, Chief Growth Officer pa Wheels Up. "Tinogamuchira neushamwari network yeEGLTA yevashandi vekufamba uye vafambi veLGBTQ + mumhuri ye Wheels Up uye tinofara kuvazivisa kune iyo brand uye yedu suite yezvigadzirwa, kusanganisira nhengo dzevamiririri, mhinduro dzemakambani, manejimendi manejimendi uye kutengesa kwese kwendege. Wheels Up inopa mhinduro yekufamba nendege neimwe yendege huru kwazvo dzinotarisirwa pasi rose. ”
Kubatana kwepasirese ne IGLTA kunotsigira mavhiri ekukura mavhiri anotarisa pakuvaka zvido uye kuvimbika pakati pezvikamu zvakasiyana zvemitezo zvinosanganisira LGBTQ +, vakadzi nevanhu vane ruvara. Dhipatimendi Rezvekukura, rinotungamirwa naChung, riri kuwedzera Wheel Up nhengo yenhengo inoumbwa nemasangano, masangano, vatungamiriri, vatengesi, uye zvemitambo uye varaidzo hunhu sechizvarwa chinotevera chemapepa epachivande.
"Takakosheswa kugamuchira maWhiri kumusoro kusangano redu revamwe vanoita basa rekushanya vakazvipira kusimudzira kuchengetedzeka nekuenzana muindasitiri," akadaro John Tanzella, IGLTA President / CEO. "Kuva nerutsigiro rwevabatsiri vemakambani kwakakosha kuchinangwa cheGLTA chekusimudzira kunzwisisa kweLGBTQ + kufamba pasirese, uye tinorumbidza ma Wheels Up nekusimbisa kuzvipira kwavo kune akasiyana uye kuiswa mukufamba."